ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမများ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေနှင့်ကြုံနေရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမများ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေနှင့်ကြုံနေရ
Posted by aung97 on Jan 11, 2010 in News |4comments
ံဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမများ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေနှင့်ကြုံနေရ
Saturday, 09 January 2010 20:12 ဘစောတင် Irrawaddy
written by Ko Ko, January 11, 2010
ဂျော်ဒန် မှာလည်း မြန်မာတွေ ရှိကြောင်း အခု ဒီသတင်းကို ဖတ်မိမှပဲ သိရတော့တယ်။ ခလုတ် ထိမှ အမိတ- ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။
လူဆိုတာ အဆင် ပြေနေတုန်း အခါမှာတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိပေးစရာ မလိုသလို ဘယ်သူ့ဆီ ကမှလည်း အကူအညီ တောင်းခံစရာ မလိုဘူးပေါ့။ဒုက္ခ ရောက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အော်ကြ ဟစ်ကြ အမျိုးသားအကြောင်း၊ နိုင်ငံ အကြောင်း၊ အစိုးရ ကောင်းကြောင်း မကောင်းကြောင်း၊ ဆွဲမိဆွဲရာ ဆွဲတော့တာ ထုံးစံပါ။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသမှာ ကတော့ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ် နဲ့ နီပေါ နိုင်ငံ သားများကို ရှောင်လို့ မရနိုင်ပါ။ နေရာ အသီးသီးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး နဲ့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ ဂိုဒေါင် ဌာနများတွေမှာ တောင်အာရှ နိုင်ငံသား များကို ပိုပြီး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ နဲ့ မလေး တို့မှာ မြန်မာတွေ ပလူပျံနေသလို ပါ။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသ နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းမှာလည်းပဲ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ်၊ နီပေါ နဲ့ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံသားတွေ ဆိုတာ မမြင်ချင် အဆုံးပဲ။နေရတိုင်း၊ ချောင်တိုင်း၊ နေ့နဲ့ ညတွေမှာ သူတို့တွေကို တွေ့နေ ရတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ဘင်္ဂလား ဆိုတာ စာရင်းထဲကို မထည့်တာ။
ပြောလိုက်ရင် အကုန် ပါသွားဦးမယ်။ ဒီလိုပါ- မမိုက်ရင် မိဝေးဖဝေး နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည် တွေမှာ ထွက်ပြီး အလုပ် မလုပ်ဘူး။ မင်း တစ်ရာ မိုက်ရဲရင် ငါလည်း တစ်ထောင်လောက် မိုက်တတ် တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးနဲ့အလုပ် လုပ်ရတယ်။
ကြားရသ လောက်ကတော့ ဒူဘိုင်းမှာရှိတြဲ့ မန်မာ များကတော့ မခေကြဘူး။ သူတစ်ခွန်း ငါတစ်ခွန်း၊ ဘ တစ်ပြန် ကျား တစ်ပြန်ပါပဲ။
အင်းပေါ့လေ ဂျော်ဒန် နိုင်ငံမှာ ဆိုတော့လည်း အများနဲ့ အလှမ်း ဝေးလွန်းတာကိုး။ ပြီးတော့ မိန်းမသား တွေချည်းလည်း ဖြစ်ပြန်တော့ ပိုခက်တော့ တာပေါ့ဗျာ။ဒါကိုတော့ ရန်ကုန် အေးဂျင့်ကလည်း တာဝန်တော့ မကင်းပါဘူး။ ကူညီပေး သင့်ပါတယ်။ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေး သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
written by maung din, January 10, 2010
I felt so sorry for that. let’s help them.
by နေလင်း, January 10, 2010
နယ်ချဲ့ ခောတ်တုန်းကတောင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ အဆင့်တန်း ရှိရှိ ကျွန်လုပ်နိုင်သေးတယ်..။
ဘယ်သူ့ အပြစ်လည်း လို့ ပြောရ တာလည်း မောပြီ
written by အိုက်လုံး, January 10, 2010
ပြည်ပ ရောက်နေတဲ့ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် အသံကုန် အော်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေ က ကူညီဖို့ ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်
ပါဘူး ဘာလို့ တုန်း ဆိုတော့ ဒီလို ကိစ္စမျိုးက ငွေရှိရုံနဲ့ မရပါဘူး အာဏာနဲ့ မှ ရမယ့် ကိစ္စမျိုးပါ
written by ကိုစစ်အောင်, January 10, 2010
မြန်မာ ပြည်မှာ လဲ ကျယ်မရ သူများတိုင်း ပြည် မှာ လဲ အနိုင်ကျင့် ခံရ တော်တော် သနား စရာ ကောင်းနေပါလား ။ အားလုံး ဟာ စီးပွားရေး အဆင် မပြေတာက စတာပဲလေ။ မြန်မာ ပြည်မှာ သာ လုံလုံ လောက်လောက် ရ ရင် ဘယ်သူက တခြား တိုင်းပြည် သွားမှာ လဲ ။
written by win aung, January 10, 2010
That is very important Class XXXXX
Who is responsibility?YGN agent or who, they should be arrived in Jordan.
What about international labour organization?Search true , such correct.
written by ko aung, January 10, 2010
ထို ၆၀၀ တွင် ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း တဦး ပါဝင်ပါသည်။
ဂျော်ဒန်တွင် မြန်မာသံရုံး မ၇ှိသည့်အတွက် နီးစပ်၇ာ အီဂျစ်နိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးသို့ ph ဆက် အကူအညီ တောင်းခံပါသော်လည်း အ ဆက်အသွယ် မ၇ပါ။ ထို့ကြောင့်စုံစမ်းပေးပါ၇န်
written by obasa.aye, January 10, 2010
မြန်မာအလုပ်သမား၊ ဂျော်ဒန်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ၊ သဘာဝလို့ ပြောရင်ရပါသေးသည်။ ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်လူမျိူး အချင်းအချင်း။ အနိုင်ကျင့် နေတာတွေ တပုံကြီးပါ။ ဒါတွေလဲ အာလုံး အသိပါဘဲဗျာ။ ပြောခြင်တာကတော့ တိုင်းပြည် အုပ်ချူပ်တဲ့၊ လူကြီးတွေကမှ ကိုယ့်လူမျိူးကို ၊ဘယ်တုန်းကများ ကူညီဘူးတဲ့ သာဓကရှိဘူးလို့လဲ၊ သူတ သိတာ၊ သယံ ဇာတတွေ သုံးပြီး၊ တိုင်းပြည်က လူတွေကို ဘယ်နည်း နှင့်နှိုပ်ကွပ်ရမယ်၊ ဒို့ရွှေသားစဉ် မြေးဆက် အာဏာတည်ဘို့ဘဲ၊ ကောင်းတာ ဟူသ၍ ဘာမှ နှစ်၂၀ကျော် အတွင်း အတွေ့ မမြင်မကြား ဘူးပါဗျာ။ ကောင်းတာ လေးများသိရင် ပြောကြပါဗျိူ့။
written by kyaw, January 09, 2010
ဒါတွေဟာ အရင်းစစ်တော့ အမြစ် မြေက ဆိုသလို ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ? စစ်အစိုးရဟာ သူတစ်ပါး တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်ခံပြီး လုပ်နေရတဲ့ သူတွေဆီက တစ်လကို ၁၀% အခွန် ကောက် ဒါပေမယ့်ြ ဖစ်လာသမျှ အလုပ်သမား ပြဿနာ တွေကို ဘာမှ တာဝန်ယူခြင်း မရှိပါဘူး။ မိမိပြည် တွင်းမှာလည်း အလုပ် အကိုင်တွေ၊ လုံလောက်တဲ့ လစာငွေေ တွစီစဉ် ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘူး။ ဒါတွေကို တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေက ဓါတ်သိပြီြး ဖစ်တဲ့အတွက် ငါတို့လုပ် ချင်သလို လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုပြီး မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အပေါ်မှာ ဖိနှိပ အနိုင် ကျင့်နေကြတာပါ။ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့လည်း မိသားစု စားဝတ် နေရေး၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် သူတစ်ပါး တိုင်းပြည်မှာ ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခါးစီး ခံနေရကြရတာပါ။
written by ကူညီကြပါ, January 09, 2010
ပြည်ပ ရောက်နေတဲ့ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် အသံကုန် အော်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေ ဒီကိစ္စကို တခုခု အကူအညီ ပေးဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်။
myo aung has written 1 post in this Website..
not above the law simple and honest with golden rule
View all posts by aung97 →
Many sad comments on this issue:
1. It’s because of FAILED policies of the Junta.
True. Just enjoying monopolies for themselves and their cronies.
2. Scarce jobs and high unemployment driving people overseas.
3. Even when enslaved under prior British colonial rule, conditions were not as worse off as now.
4. Junta(s) always take(s) payroll tax 10% even ahead. Take(s) passport renewal tax all the time. Do/Did nothing to protect. Just entrenching themselves in power for decades and for eternity and oppressing people.
Many comments ask for help from fellow expatriates.
True. Some things need to be done from the Governmental level. They require speedy action.
For this, I add:
1. Burma expatriates need to call up the various Burmese embassies in the country they are now residing.
2. Contact the NCGUB (National Council of the Govt of the Union of Burma), or local activists. Examples: Burmese American Democracy Alliance, Campaign for Burma (UK), L A Organizers, … they have contacts. They can, in turn, contact international non profit organizations. This is an opportunity to serve andachance to win friends and influence people.
Some can be done for the long term by local and expatriate Burmese businessmen with the help from multinational companies.
Set up factories like the textile factories in Burma. Naturally, there are enormous difficulties. But this is one solution. People need not go overseas.
There were multinational companies from South Korea, Taiwan, Vietnam, Japan, China, western countries…. interested relatively lower Burma wages. Won’t work? Think again. However, need hard work, goodwill, and perseverance.
Example: War ravaged Cambodia is now growing. People got work. I heard China has been setting up “a factory every month” there.
(Local Burmese industralists/merchants can find out from the Commercial sections of Chinese embassy and those of other countries. Nothing to lose. Not mutually advantageous? Just decline).
I have been working in various countries and nowadays, my colleagues all over the world have their own incidences and witness the abuse of local people over Burmese. Even compatriot overseas workers knew that Burmese are indifference to their own plight of living under dictatorial regimes. What they do not know is we had paid thousands of our lives and limbs in peaceful demonstrations facing the battle-hardened ( Criminal) soldiers equipped with tanks, bring-carriers and automatic machine guns. We never received water cannon and rubber bullets from our own ( Fascist) troops. We were very brave to be able to survive such brutal treatment from Dictators. Do not bow down to the pressure of less than 10% tortures of military regime. Do not see other overseas compatriots through racially tainted eyes. Indian or Bangladeshi are the same human as we Burmese are. In foreign countries, we have to work in mixed races and genders. Do not expect the racially, sexually outdated segregated working condition of Burma. Fight back if you are attack. I will report this incidence to the Jordanian authority and International Labour Organization. The agent you mentioned in the article seems like one of the target- sanctioned company by EU and USA. Do not waste the time expecting help from the Military thugs, Burmese embassy staffs and Burmese agencies. They are genuinely useless people when they have to deal something in overseas territories. Burmese Prime Minister and Foreign Minister had to sit at the discarded corners because they afraid of the foreigners and their inquiry about condition in Burma. No one care about these thugs when they attend meeting in Asean Countries. Besides, These thugs do not interested in Burmese trouble in overseas. The excuse they used to give when they were approached for help is ” they, the people came to work in foreign lands on their own accord and why should I help them as it was not my business”. Than Shwe is not interested in this news and he is completely happy with the suffering of his enemy, Burmese people. One thing we can do is BOYCOTT THE ELECTION.